Madaxweynaha oo saxiixay miisaniyadda 2019-ka - Halbeeg News
Madaxweynaha oo saxiixay miisaniyadda 2019-ka
MUQDISHO (HALBEEG)- Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, mudane Maxamed Cabdullahi Farmaajo ayaa maanta saxiixay miisaaniyadda dowladda federaalka ee sanadka 2019-ka.
Laba maalmood ka hor ayay ahayd markii golaha shacabku ay cod aqlabiyad leh ku meel mariyeen miisaniyadda dowladda oo hindiseheeda ay dhawaan hor keentay wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalka ah.
Madaxweynaha ayaa golaha baarlamaanka ku ammaanay sida masuuliyadda leh ee ay xilka iskaga saareen dadajinta ansixinta miisaaniyadda sanadlaha ah ee ee dowladda.
Madaxweynaha ayaa ku nuux nuuxsaday kororka ku yimid miisaaniyadda sanadka cusub isaga oo xukuumadda ugu baaqay in ay wax qabad muuqdo ka samayso dhanka hirgalinta adeegyada bulshada, shaqo abuurka iyo waliba adkeynta ammaanka dalka.
Madaxweynaha ayaa tilmaamay in kororka miisaaniyaddu ay farriin u tahay qorshayaasha baaxadda leh ee ay dowladda Soomaaliya kula dirirayso musuqa iyo wax isdaba marinta.
“Koboca dakhliga dalku waxaa uu ka marag kacayaa miro dhalka qorshayaasha ku qottoma la dagaallanka musuq maasuqa sidaas darteed waa in isbeddel muuqda aan ka samayno dhinacayada adeegga bulshada, amniga iyo hirgalinta kaabeyaasha dhaqaale, si dadkeennu ay u helaan nolol wanaagsan,” ayuu yiri madaxweyne Farmaajo.
Madaxweynaha ayaa bogaadiyay dadaalka iyo isgarabsiga dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed ay ku doonayaan mideynta cududdooda iyo dib u dhiska dalka taasoo uu ku macneeyay in ay caddayn u tahay sida soomaaliya ay uga go’antahay in ay wax la qeybsado dunida kale ee asaaggeeda ah.
Ugu dambeynttina madaxweynaha ayaa u mahad naqay madaxda wasaaradda maaliyadda dowladda iyo khubarada dhaqaalyahannada ah ah ee waqtigooda ku bixiyay diyaarinta miisaaniyadda dalka.
Bilihii u dambeeyay madaxweynaha ayaa ka codsanayay golayaasha dowladda federaalka ah in ay kaalin ka qaataan dib usoo nooleynta shuruucda dalka isaga oo si gaar ah golaha baarlamaanka ugu boorriyay dadajinta ansixinta shuruucda kale ee hortaalla sida sharciga xaqsiinta ciidamada qaranka.
Guddoonka baarlamaanka Carabta oo bogaadiyay dhismaha isbaheysiga Badda Cas
Degdeg: Xubnaha baarlamaanka cusub ee Puntlad oo la dhaariyay guddoomiye KMG ahna doortay